ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသမီးငယ်များကို 'အမျိုးသမီးကဲ့သို့ပြုမူ' ရန်ပြောခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီ - သတင်း
ကျနော်တို့အမျိုးသမီးများ 'အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကဲ့သို့ပြုမူ' ဖို့ပြောရပ်တန့်အချိန်
အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦး တည်သောအခါစကားစုသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကဲ့သို့ပြုမူသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားရသောအခါစိတ်ရှုပ်ထွေးသည်။
ငါယဉ်ကျေး။ ဖော်ရွေသည်၊ သင့်လျော်စွာဝတ်စားဆင်ယင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရူးမလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ အမြဲကျေးဇူးပြုပြီးသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းပြီးမရှုံးနိမ့်ပါ။
တစ် ဦး 'အမျိုးသမီး?' ပင်ကဘာလဲသူတို့ငါ့ကိုငါ့ကိုပြုမူစေချင်ကြဘူး? ခင်ပွန်းတစ် ဦး ကိုရှာပြီးသူမဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ကျေနပ်မှုရရန်နေထိုင်သောရိုးရှင်းသောစိတ်ထားအိမ်ရှင်မ။ အမိန့်ကိုယူသူ၊ သူမပြောသည့်အခါနားထောင်ပြီးသူမနှိပ်စက်ခံရသည့်အခါအခြားနည်းကိုကြည့်သူတစ်စုံတစ် ဦး က?
သို့မဟုတ်သူတို့ Aquitaine ဘုရင်မ Elanor, အင်္ဂလန်ရဲ့ဟင်နရီ II ၏မယားကိုဆိုလိုတာလား ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော၊ လိုချင်သော၊ လွတ်လပ်သော၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်ဖြားယောင်းခြင်း - Eleanor ကို 'bad' အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဒီနေရာမှာရှိလူကြီးများအားလုံး - သင်ဟာအမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ပြောဆိုရန်၊ သို့မဟုတ်တတ်စွမ်းနိုင်သည့်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာမင်းကြီးပြင်းလာတာမဟုတ်တာကြောင့်ငါဒါမှမဟုတ်ငါ့မျိုးဆက်ထဲကအခြားမည်သည့်မိန်းကလေးမဆိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့မမှန်ကန်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။
အစစ်အမှန်ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာလက်ထပ်သည်
ကျွန်တော့်မျိုးဆက်၏မိန်းမပျိုများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပိုမိုလွတ်လပ်မှုနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။ ငါပြောချင်တာကိုပြောခွင့်ပြုတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှေ့ကအမျိုးသမီးတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးချမလဲ။
Ed Sheeran နှင့်ချယ်ရီ seaborn 2017
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးinတ္ရေးမှတ်ရေးသောစာရေးဆရာ Sarah Ban Breathnach က“ မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အပြုအမူရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုငါတို့ကြောက်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြောခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးများကို ဦး စားပေးခြင်း၊ ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေသည်ကိုလိုက်လံရှာဖွေခြင်း၊ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသောမြို့မြင်ကွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ငါတို့သူငယ်ချင်းများကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောသူတစ် ဦး ဦး ရှိမရှိ။
မည်သည့်ကောင်းမွန်သောသူငယ်မဆို၎င်းသည်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖြစ်ပျက်နေသော်လည်းသူမသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုမူခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုအရူးမပြုလုပ်ပါ။ သို့သော်သူမပြောသည့်အခါသူမပါးစပ်ကိုပိတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ လူထုံ။
ငါ၏အ Instagram ကိုကြည့်ရှုငါ့ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ကငါ့ကိုဘယ်လိုပြုမူစေချင်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်၊ ပျော်ရွှင်တယ်၊ ပျော်ရွှင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကငါလုပ်သင့်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတယ်။ ငါလုပ်ချင်တာကိုကြိုးစားပြီးခက်ခဲတဲ့နည်းကိုသင်ယူတတ်တယ်။ အဲဒါတောင်မှကြက်သားတောင်ပံတွေစားတာ၊ အိပ်ရာထဲမှာငံပြာရည်ပူဖိတ်တာကိုဆိုလိုတာ။
ငါမဟုတ်ဘဲသူငယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်, အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကဲ့သို့ပြုမူမဟုတ်ဘူး။